Hydraulic Hydro Radial piston motors Latest Mutengo, Mugadziri
Hydraulic hydro radial piston motors mugadziri
Hydraulic mota yakakwira torque yekutengesa
Sezvo yakadzikira kumhanya yakakwira torque hydraulic mota vagadziri, Isu tinopa zvese zvakaderera uye zvakakwirira zvekumhanya hydraulic mota. Funga nezve yedu hydraulic motors yemhando dzose uye zvinogoneka dhizaini.
Zvigadzirwa zvedu zvinopisa & sevhisi
Hydraulic oiri mota Huru kudzvinyirira kurwisa
Oiri hydraulic pombi yakanyanya kumanikidza, Yakakwira-Inomanikidza Vane Motors, Hydraulics & Pneumatics, Variable Displacement Hydraulic Motors akagadzirirwa ese akavhurika uye akavharwa maseketi. mu cycloidal structin uye yakaderera kumhanya Chief Compact Hi-Torque mota!
Diki hydraulic motors
Iyo dhizaini iri nyore, kutaridzika isingaiti, yakaderera kumhanyisa kudzikama uye hwakareba hupenyu hwehupenyu ndizvo zvigadzirwa zvekutanga kutsiva mota yakatumirwa kunze. compact dhizaini, uremu kurema uye yakakwirira simba density. Yakakwirira mhando diki uye Compact hydraulic mota Factory Yakagadzirwa kutengeswa.
Hydraulic mota ine yakakwira torque pakaderera
yakakwirira-kumanikidza Kwakaderera kumhanya kwazvo torque hydraulic mota yekugadzira, ine yakavimbika yepamusoro-simba kuwanda, modularity uye hupfumi dhizaini Speed ​​kubva ku110-1450rm, Tenga Yakakwira Torque Motors pamutengo wakanakisa kubva kwatiri. Axial uye radial pisitoni mota.
Hydraulic mota yakakwira zvekumhanya
Tine makore mazhinji ekugadzira ruzivo uye tiri vanokwanisa kambani yekugadzira. Yekumhanyisa mhando mhando hydraulic dhiraivhu mota, Yakakwira Torque Hydraulic Motors, Yakakosha rotor uye stator, yepasirese ine simba, yakavimbika & inoshanda giredhi remauto pasi pemvura hydraulic motors.
Ndeipi hydraulic motors yekutenga?
Isu tinopa mhando yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera. 50 hp hydraulic mota, 540 rpm hydraulic mota, 20 hp hydraulic mota, kunyangwe 10,000 rpm hydraulic mota. Makore einjini yekugadzira ruzivo chete kukupa iwe mhando yepamusoro uye yakasimba mota. China yakaderera kumhanya yakakwira torque hydraulic mota vagadziri.
Icho chigadzirwa chinoshandura hydraulic kumanikidza uye kuyerera kune rotary kufamba. Mvura inoshanda inogona kuva mvura kana, kazhinji kazhinji, hydraulic fluid. Hydraulic mota inoshandura emagetsi emagetsi simba kuita rotary magetsi simba. Mune General, hydraulic mota dzinoiswa mune imwe yezvikamu zviviri: kumhanya kwakanyanya, yakaderera torque (HSLT) kana yakaderera kumhanya, yakakwira torque (LSHT).
Kune rumwe ruzivo?
Kana iwe uine zvigadzirwa zvako zvaunofarira, uya ugotibata! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu.